उपत्यकाका कुन अस्पतालमा कति छन् आइसियु र भेन्टिलेटर ?
आधाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा छन् । दिनप्रतिदिन संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अस्पताल भरिभराउ भएका छन् ।
अहिले उपत्यकाका १४ वटा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । काठमाडौंका अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव सुरु भइसकेको छ ।
देशभरका विभिन्न अस्पतालमा १ हजार २४९ आइसियु बेड र ५२६ भेन्टिलेटर रहेका छन् । तीमध्ये ४७७ जना आइसियु र १३१ जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने १ हजार ९४ जना आइसोलेसनमा, १६० जनाको आइसियुमा र ५२ जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
कुन अस्पतालमा कति आइसियु र भेन्टिलेटर ?
वीर अस्पतालमा ७६ बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ । वीरले नयाँ भवनलाई नै कोभिड अस्पताल बनाउने गरी तयारी थालेको छ । वीरमा अहिले १० बेडको आइसीयु र ५ वटा भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएको छ । जसमध्ये ७८ जना आइसोलेसनमा, ७ जना आइसियु र १ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. अच्युत कार्कीले बताए ।
महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १३० बेडको आइसोलेसन वार्ड सन्चालनमा रहेको छ । जसमा १५३ जनाको उपचार भइरहेको छ । २४ बेडको आइसियु, ५० बेडको एचडियु र २० वटा भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको छ । जसमा ३५ जनाको आइसियु र ७ जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. शान्तकुमार दासले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा १२० आइसोलेसन, २० बेडको आइसियु र ८ बेड भेन्टिलेटर रहेको छ । यहाँ आइसोलेसनको क्षमताभन्दा बढी संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । १६६ जनाको आइसोलेसन वार्डमा उपचार भइरहेको अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. प्रविन नेपालले बताए । त्यस्तै १२ जनाको आइसियु र ६ जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६६ जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ । त्यस्तै ९ जनाको आइसियुमा र ११ को भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बाँस्तोलाले बताए । अस्पतालमा २० बेडको आइसियु र ११ वटा भेन्टिलेटर रहेका छन् । अस्पतालले नयाँ बिरामीका लागि बेड थप्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरी अस्पतालले १३२ बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ । कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि आइसियु सहितको २० वटा भेन्टिलेटर बेड र ३९ वटा एचडियु बेडको व्यवस्था गरेको छ । जसमा १२१ जना आइसोलेसन, ८ जना आइसियुमा उपचार भइरहेको अस्पतालका प्रवक्ता डिआइजी रामकृष्णराज भण्डारीले बताए । यहाँकाे भेन्टिलेटरमा भने हालसम्म कोही पनि बिरामी बस्न परेको छैन ।
वीरेन्द्र अस्पतालले ७१ बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ । जसमा सोही संख्यामा कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । त्यस्तै ५ जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ । यहाँ पनि हालसम्म कुनै कोरोना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छैन ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन, १४ बेडको आइसियु र ६ बेडको भेन्टिलेटर छुट्याइएको छ । यहाँ हाल १४ जना कोरोना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत छन् ।
भक्तपुर अस्पतालमा ६८ बेड आइसोलेसन, ६ आइसियु बेड र ६ भेन्टिलेटरको क्षमता रहेको छ । यस अस्पतालको आइसोलेसनमा २७ जना, आइसियुमा ४ जना र भेन्टिलेटरमा २ जनाको उपचार भइरहेको कोभिड फोकल पर्सन डा.सुमित्रा गौतमले बताइन् ।
ललितपुरको पाटन अस्पतालमा ३०० बेडको आइसोलेसन, २६ बेड आइसियु र १७ बेड भेन्टिलेटर छुट्याइएको छ । जसमा ९० जना आइसोलेसनमा, ९ जना आइसियु र ९ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको कोभिड फोकल पर्सन डा. आशिष श्रेष्ठले बताए ।
सानेपास्थित स्टार अस्पतालमा २५ जना आइसोलेसनमा, ५ जना आइसियुमा र १ जना कोरोना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । जहाँको क्षमता पनि त्यतिकै नै हो ।
यसैगरी ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको आइसोलेसनमा ४५ जना, आइसीयुमा १३ र भेन्टिलेटरमा ५ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
यस्तै, ह्याम्स अस्पतालमा ८२ जना आइसोलेसनमा, १८ जना आइसियुमा र ५ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा ४९ जना आइसोलेसनमा, २६ जना आइसियुमा र ६ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा ११३ जना आइसोलेसनमा छन् । त्यहाँ आइसियु र भेन्टिलेटमा कोही पनि संक्रमित रहेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति : बैशाख २०, २०७८ साेमबार १४:१०:१९, अन्तिम अपडेट : बैशाख २०, २०७८ साेमबार १४:११:१५